Umxube oshukumisayo, uMatshini wokuZalisa, Ukuxuba iTanki - UMaxwell
Ngaphezulu kweminyaka eli-10 yamava
Iyaqiqa, izinzile kwaye ichanekile
Ngexesha elifanelekileyo kunye nelisebenzayo emva kwentengiso
SIYABONISA IIMPAWU ZOKUGQIBELA EZIQINILEYO
I-Wuxi Maxwell automation Technology Co, Ltd ityalwe kwiDola enye yezigidi zeedola. Sikwindawo ye-wuxi High-tech Zone Zone. Sibandakanyeka ikakhulu kwizinto zokuthambisa, amayeza, ukutya, amashishini emichiza, kunye nokudibanisa uphuhliso, ukuvelisa kunye nentengiso kunye.
(Iimveliso zethu eziphambili; Oomatshini bokuphephelela i-vacuum, oomatshini bokugcwalisa, oomatshini bokufakela iileyibheli, izixhobo zensimbi engenasici, abaxubi bomhlaba, iicrushers, oomatshini bokushicilela abangamanzi, njl. Njl.)
I-Wuxi yidolophu entle, kufutshane nesixeko iShanghai - isixeko esikhulu sase China. Ke kukulungele ukuthunyelwa kweempahla kwihlabathi ukusuka kwizibuko le-shanghai.
Funda ngakumbi +
UMatshini OYILWAYO WOKUFUNDISA I-VACUUM
Ngumatshini wokuzalisa olula, olula kwaye olonga iindleko.
UKUZALISEKISA KWESICWANGCISO SOKUGQIBELA SESICWANGCISO SOKUGQIBELA NOKUQWALASELAYO
Sihlalutya ukutywina, ukubamba ityhubhu kunye nokuzalisa umatshini wokugcwalisa ityhubhu esele ikhona kunye nomatshini wokuvala.
UMDLALO WESITHU SAMANZI
Ababandakanyeka ikakhulu kumxube wekhonkrithi, isikhululo sokudibanisa ukhonkrithi, kunye nempompo ekhonkrithi kunye nobunye oomatshini bokwakha.
Icandelo leMaxwell livelise izixhobo zamayeza aphakathi
Unyango sisixhobo okanye ukulungiswa kokuthintela, unyango okanye ukuxilongwa kwezifo zabantu kunye nemfuyo. Kwisiseko somthombo, amayeza angahlulahlulwa abe ziyobisi zendalo kunye zokwenziwa. Unyango kwakhona unokuthintela izifo, ukunyanga izifo, ukunciphisa iintlungu, ukuphucula impilo ...
Iidayi, ezisetyenziselwa ukwenza imibala yefibre okanye ezinye izinto, zahlulahlulwe zaba zimbini iintlobo-zedayi yendalo kunye needayi zokwenziwa, kubandakanya idayi esebenzayo, idayi yedal, idayi yesalfure, amadayi e-phthalocyanine, amadayi e-oxidation, amadayi e-condensation, amadayi okusasazeka njl njl. sisixhobo somgubo ...
Umthengisi waseTshayina usezingeni eliphezulu ukutyibilika kweplastiki